प्रधानमन्त्री ओली र भारतको सम्बन्धमा सुधार ! सम्बृद्धीको सपना पुरा होला त ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
प्रधानमन्त्री ओली र भारतको सम्बन्धमा सुधार ! सम्बृद्धीको सपना पुरा होला त ?
Posted by Milap Subedi | ८ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १२:४४ |
प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा एमाले र माओवादी केन्द्रले सात बुँदे सहमती गरेर पार्टी एकताको सन्देश दिएका छन । यो संगै नेपालको राजनितिमा स्थिरताको सुरुवात भएको छ । अव नेपालमा सरकार स्थिर हुने र विकास निर्माणले गति लिने जनताको विश्वास छ । लामो सशस्त्र द्धन्दबाट आएको नेकपा माओवादी केन्द र झापा आन्दोलनबाट राजनितिका शक्तिको रुपमा उदय भएको नेकपा एमाले अन्तत एक भएका हुन । पार्टी एकताको सवालमा दुई पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले एक अर्कामा त्याग गर्दै साँतबुँदे सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन । यसले लामो अस्थिर राजनितिको अन्त्य भएको छ ।
ओलीको चुनौती छिमेकी मुलुकसंग सन्तुलित दुरी
यतिबेला अव यही एकिकृत पार्टीका दुई प्रमुख नेता मध्ये एक नेता केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री छन । मुलुक संघियतामा गएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघियतालाई सफल बनाउने र जनताले आशा गरेका विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी छ । छिमेकी मुलुकसंग सन्तुलित दुरी कायम राख्दै राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु पर्ने अर्को महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पनि ओली कै काँधमा छ ।
अहिले मुलुकमा सातवटा प्रदेश कायम भएका छन । संघियतासंगै देशको कुल प्रशासनिक खर्च ९ खर्व भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । राज्यको ढुुकुटीमा पैसा नभएकै कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडी बढाउन हम्मे हम्मे भएको छ । तर पनि आर्थिक सम्बृद्धीको नारा दिएर दोस्रोपटक सिंहदरवार प्रवेश गरेका ओलीले विकास,सुशासन र सम्वृद्धीको बाटोमा अघि बढनुपर्ने नै छ । देशमा निर्यात नगन्य मात्रामा हुनु आयातले मात्रै देशको माग पुरा गर्नु आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा टाउको दुखाईको विषय बन्ने स्पष्ट छ । अहिले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा सेवामुखी क्षेत्रमा लगानी बढदै जानु,प्रविधीमा मुलुकले फड्को मार्न नसक्नु पनि मुलुक विकासमा जान नसक्नु अर्को कारण हो । ठुला ठुला आयोजनाहरु बजेटको कमि मात्रै भएर रोकिएका हैनन्, त्यो संगै प्रविधी,दक्ष जनशक्ती, र देशको नितिगत कमजोरीका कारण पनि यसले बल पुर्याएको छ ।
छिमेकीसंग सहयोग लिएर अघि बढे ओलीको सम्बृद्धीको बाटो सहज छ
पाँच बर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले आफुलाई उभ्याउन पहल गरेपनि बाम एकताको बाध्यात्मक परिस्थितीमा उनले कम्तीमा साँढे दुई बर्ष सरकार हाँक्न पाउने देखिन्छ । भलै त्यो बाउन्ड्री होला नहोला अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसभन्दा अघि नै जनतामाझ देखाएको सम्बृद्धीको नारा पुरा गर्न ओलीका लागी साँढे दुई बर्ष थोरै मात्रै समय हैन, अति नै थोरै समय हुनेछ । तर पनि उनले देखाएका सम्बृद्धीको बाटोको ट्रयाक मात्रै निर्माण गर्न उनले अव आफ्नो देशको स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै छिमेकी मुलुक विशेष गरी भारत र चिनलाई उनले संगै लिएर हिड्न जरुरी छ ।
जसरी अहिले उनलाई भारत भन्दा चिन संग नजिकिएको शंका गरिन्छ, उनले त्यो शंका मेट्र्नैपर्ने हुन्छ । भारतको सहयोग विना उनले सोचेको सम्बृद्धीको सपना पुरा हुन फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ । उनले आर्थिक विकासको सवालमा विशेषगरी भारतसंग मिलेर जानुपर्ने भौगोलिक,र राजनितिक बाध्यता हुने देखिन्छ । खुल्ला सिमाना,खुल्ला ब्यापार,रोटीबेटीको सम्बन्धका कारण पनि ओलीले एकोहोरो बाटो हिड्न सक्ने अवस्था रहन्न । ओलीले भारतसंग सहकार्य कै बाटो लिन जरुरी हुने देखिन्छ ।
मोदीको दुई कल र शुष्माको भेट सम्बन्ध सुधारको सेतु !
सबैभन्दा पहिला त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा सफलता प्राप्त गरेपछि पहिलो फोन गरेर तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बधाई दिएका थिए । यसको संकेत थियो, भारत अव ओलीको आगामी नेतृत्वसंग सहकार्य गरेर संगै जान चाहन्छ । राजनितिक रुपले एमाले माओवादी एक हुने परिस्थिती सिर्जना हुँदै गर्दा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनितिमा जे भए पनि हस्तक्षेप नगर्ने बरु नयाँ आउने सरकारसंग मिलेर जाने संकेत दियो ।
फलस्वरुप भारतिय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आईन उनले सो भेटमा सबैभन्दा महत्व भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अनुमोदित भईसकेका ओलीलाई दिईन । एक्लाएक्लै भेट समेत गरिन । त्यसपछि भारत ओलीसंग नजिकिएको सन्देश प्रवाह भयो । अव ओलीलाई यसैको जगमा सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाएर जानेमात्रै विकल्प छ । जसबाट नेपालले धेरै फाईदा लिन सक्ने प्रष्ट छ । विश्वको छैठौ स्थानमा रहेर आर्थीक सम्बृद्धीतिर लम्किरहेको मुलुक भारतसंग ओलीले आगामी दिनमा देशको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउदै दिर्घकालिन फाईदा लिन सके मात्रै नेपालले सोचेको सम्बृद्धीको सपना पुरा हुनेछ ।
‘लि क्यान यू’ र ‘पार्क चुङ ही’ बन्ने अवसर
जसरी सिंगापुरलाई विभिन्न चुनौतीको बाबजुत पनि त्यहाँका नेता लि क्यान यू ले विश्वकै सम्बृद्ध र नमुना सिंगापुर बनाए, विषम परिस्थितीमा पनि आर्थिक रुपले टाट पल्टिएको दक्षिण कोरियामा त्यहाँका नेता पार्क चुङ ही ले आजको दक्षिण कोरिया बनाए । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त्यो अवसर आएको छ । यी दुवै विदेशी नेताले छिमेकसंग सन्तुलित निति अपनाउदै धेरै भन्दा धेरै फाईदा लिएका थिए । यसैगरी ओलीले पनि देशको राष्ट्रियतालाई जोगाउदै, छिमेकीसंग समदुरी कायम गर्दे विकासको बाटो कोर्न सक्नुपर्छ । यो नै ओलीको हित र देशको हित हुने प्रष्ट छ ।
Previousराष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर
Nextडा.केसीद्धारा अदालतको अवहेलना मुद्दामा तारेख बोक्न अस्वीकार
प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक कति ?
११ श्रावण २०७५, शुक्रबार १८:१०
‘क्लीन इनर्जी र ग्रीन इनर्जीको विकल्पमा जलविद्युत इनर्जीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ : प्रधानमन्त्री
२० माघ २०७३, बिहीबार १६:३५
सैनिक भर्ना छनोटमा आर्थिक चलखेल, एक सय ८० जना कार्वाहीमा
१२ कार्तिक २०७५, सोमबार १४:१८
नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको पहिलो शृङ्खला नेदरल्याण्ड्ससँग खेल्ने
११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०८:२७